Lon० एकाकीपन वाक्यांशहरू जुन तपाईंसँग लड्न मद्दत गर्दछ स्वयं सहायता संसाधन
कम से कम समयको लागि केहि मानिसहरु छन् जो एक्लै बस्छन्। किनभने व्यक्तिहरू सामाजिक प्राणीहरू हुन् र कुनै न कुनै रूपमा, एक थोपेको वा अनावश्यक एकाकीपनले हामीलाई धेरै भावनात्मक क्षति गर्न सक्छ ... तर एक्लोपन आफैमा पनि खराब हुँदैन, र वास्तवमा यो आवश्यक पनि हुन सक्छ।
यसले तपाइँलाई आफैंलाई फेला पार्न, तपाइँ के महसुस गर्नुहुन्छ र तपाइँले कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। किनकि तपाईं एक तरिकामा हुनुहुन्छ र सायद तपाईं जहिले पनि व्यक्तिले घेरेको कारणले गर्दा, तपाईं वास्तवमै भित्र कसरी हुनुहुन्छ भनेर तपाईंले पहिले कहिल्यै महसुस गर्नुभएन। वास्तवमा त्यहाँ त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन आफैंलाई नबुझीकन सधैँ मानिसका वरिपरि रहन मनपर्दछ। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ के उत्तम एक्लोपन वाक्यांशहरु के हुन्?
1 एकाकीपन राम्रो संगति हुन सक्छ
2 एकाकीपनका विभिन्न प्रकार छन्
3 एक्लो वाक्यांश जसले तपाईंलाई सोच्न बाध्य पार्छ
एकाकीपन राम्रो संगति हुन सक्छ
यो गम्भीर गल्ती हो, किनकि एकाकीपन राम्रो संगति हुनसक्दछ, किनभने हामी आफैंमा छौ, हामी संसारलाई हाम्रो आँखा बन्द गर्न सक्छन् र ती आफैलाई भित्र खोल्न। हामी महसुस गर्न सक्छौं कि हामी हाम्रो विश्वमा ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीज हौं र त्यसैले हामीले आफ्नो शारीरिक र भावनात्मक दुबै हेरचाह गर्नुपर्दछ।
यी सबै केवल वास्तविक हुन सक्दछ यदि तपाईं आफ्नो भाग गर्नुहुन्छ र प्रत्येक दिन एक्लोपनाको केहि क्षणहरू आफैंको लागि हेर्नुहुन्छ। तपाईंलाई चिन्न, तपाई को हो भनेर जान्न, वा केवल तपाइँ गर्न चाहानुहुन्छ ती चीजहरूको मजा लिने र अन्वेषण गर्न ... आफ्नै लागि एक्लै समय खोज्नु भनेको जीवनको रमाइलो गर्ने एक तरिका हो।
एकाकीपनका विभिन्न प्रकार छन्
त्यहाँ एकाकीपन छ जसमा हामी व्यक्तिले घेरिएको भए पनि एक्लो महसुस गर्छौं, र यो एकाकीपनमा छ कि हामी किन यस्तो महसुस गर्छौं भनेर जान्नुपर्दछ। एकाकीपन, चाहे थोपाईन्छ वा आत्म-लागू, हामीलाई विभिन्न भावनाहरू महसुस गराउँदछ।
यो ती भावनाहरू हुन् जसले हामीलाई भित्र परिवर्तन गर्नुपर्दछ। तपाईका भावनाहरूमा फोकस गर्नुहोस् जब तपाईं खोजी गर्न एक्लै हुनुहुन्छ यसले कसरी तपाईंको वरिपरि कसैलाई नभएको महसुस गर्दछ। एकाकीपन मात्र नकारात्मक हुनेछ यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ भने।
एक्लो वाक्यांश जसले तपाईंलाई सोच्न बाध्य पार्छ
यहाँ हामी तपाईंलाई केहि वाक्यांशहरू देखाउन चाहान्छौं जसले तपाईंलाई एक्लोपना भनेको के हो भन्ने महसुस गराउँदछ र किन यो तपाईंको जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यदि कुनै बिन्दुमा तपाईंले यो महसुस गर्नुभयो कि एकाकीपनले तपाईंलाई नराम्रो महसुस गराउँछ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो भाग र गर्नु पर्छ एक पेशेवर जहाज मद्दत गर्न तपाईलाई किन यो हुँदैछ भनेर बुझ्न र तपाईको एकाकीपनमा सान्त्वना पाउनको लागि आवश्यक समाधानहरूको खोजी गर्न।
एकाकीपनलाई कसरी हटाउने
यस बीचमा, निम्न वाक्यांशहरूबाट आनन्द लिनुहोस् जुन हामीले तपाईंको लागि तयार गरेका छौं।
जब हामी बुझ्छौं कि हामी वास्तवमै एक्लो छौं जब हामीलाई अरूलाई सबैभन्दा बढी चाहिन्छ।
एक्लोपनाको प्रशंसा गरिन्छ र यो पीडित हुँदैन जब चाहिन्छ, तर मानव कुरा साझा गर्न को लागी स्पष्ट छ।
किन सामान्यतया एकाकीपनबाट बच्न सकिन्छ? किनभने त्यहाँ धेरै थोरै छन् जसले आफैंसँग कम्पनी खोज्छन्।
व्यक्तिको अनन्त खोजी भनेको उसको एकाकीपनलाई तोड्नु हो।
जीवनमा हाम्रो ठूलो यातना यो तथ्यबाट आउँछ कि हामी एक्लो छौं र हाम्रा सबै कार्यहरू र प्रयासहरू त्यो एकाकीपनबाट भाग्ने झुकाव हो।
हामी सपनाको रूपमा बाँचिरहेका छौं, एक्लै।
मानिसको एकाकीपन उसको जीवनको डर भन्दा बाहेक अरू केही छैन।
जडान जीवन हो; विच्छेदन, मृत्यु।
हामीले हाम्रो एकाकीपन र गन्तव्यसँग बाँचिरहेका छौं जुन प्रत्येकलाई चीजहरूको क्रममा पुर्‍याउँछ।
अब मैले सोचेकोमा मनन गर्न थाल्छु, र यसको गहिराई र आत्मा हेर्नको लागि, र यही कारणले गर्दा म एक्लै बढी प्रेम गर्दछु, तर अझै थोरै।
लेखन एकाकीपनको प्रतिरोध हो।
ठूलो मान्छे त्यो हो जो भीडको बीचमा, पूर्ण मिठासको साथ, एक्लोपनाको स्वतन्त्रताको साथ राख्छ।
कसरी सुन्ने भनेर जान्नु एक्लोपन विरुद्ध उत्तम उपाय हो।
एकान्तता, यद्यपि यो प्रकाश जस्तो मौन हुन सक्छ, प्रकाश जस्तै छ, सबैभन्दा शक्तिशाली एजेन्टहरू मध्ये एक हो, किनकि एक्लै मानिसका लागि आवश्यक छ। सबै मानिस यस संसारमा एक्लै आउँछन् र एक्लै छोड्दछन्।
संसारको सब भन्दा बलियो मानिस एक्लो मान्छे हो।
हाम्रो समयको महान् विश्वव्यापी परियोजना प्रतिस्पर्धा हो र यही कारणले गर्दा व्यक्ति विश्वमै ठूलो मात्रामा एक्लो रहन्छ।
हामी यस संसारलाई त्यस्तै छोड्छौं जुन हामी यसलाई प्रवेश गर्दछौंः एक्लो।
नरक यस शब्दमा सबै छ: एक्लोपन।
तिनीहरू प्रायः भन्छन् कि जो एक्लै बस्न चाहन्छ, उसको धेरै ईश्वर वा जनावर छ।
एकाकीपन एक महान शक्ति हो जसले तपाईंलाई धेरै खतराहरूबाट बचाउँछ।
एकाकीपन प्रमाण छ कि कनेक्शनको लागि तपाईंको जन्मजात खोज अक्षुण्ण छ।
एकाकीपन आफैले आफैसँग जडान हुने उत्तम अवसर हो।
यदि हामी एक्लै छौं भने हामी अझ एक्लो हुन्छौं। जीवन अनौठो छ।
यदि तपाईं आफ्नो एकाकीपनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफैंलाई माया गरिरहनु भएको छ ... र तपाईंको मुटुलाई प्रेम गर्न र अरूलाई प्रेम गर्न खोल्न अनुमति दिनुहुन्छ।
केवल तपाईको एकाकीपनमा तपाईले आफ्नो हृदयलाई शान्त पार्नुहुनेछ।
एकाकीपन बुद्धिको राम्रो नर्स हो।
एकान्तमा त्यहाँ एक मात्र एकान्त लिन जान्छ।
एकाकीपनले तपाईंलाई कमजोर बनाउँदैन, यसले तपाईंलाई जीवनमा धेरै बलियो बनाउँछ किनभने यसले तपाईंलाई वास्तवमा तपाईं को हो भनेर चिन्ने अवसर दिन्छ।
गरीबी स्पष्टतया भावनात्मक पीडाको एक स्रोत हो, तर एक्लोपन जस्ता अरू पनि छन्।
एक्लोपना कहिले क्रूर हुँदैन जब तपाईसँग कुराकानी गर्न छोडेको कसैको नजीकको अनुभूति हुन्छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, एक्लोपनालाई विभिन्न तरिकाले महसुस गर्न सकिन्छ, यसको आधारमा तपाईसँग कस्तो दृष्टिकोण छ। त्यहाँ व्यक्ति छन् जो विचार गर्छन् कि यो आन्तरिक रूपमा बढ्नको लागि सक्षम हुनु एकदम आवश्यक छ र यसैले यसलाई विश्वमा देखाउन सक्षम हुनु पर्छ। अरुहरूका लागि, यो कुनै अर्थ छैन कि एक निरपेक्ष यातना हो।
पछिल्लाहरूका लागि, कुनै श doubt्का बिना, एकाकीपन कष्ट हो किनभने तिनीहरू आफैंलाई खोज्ने डर गर्दछन्। तिनीहरू एक अर्कालाई चिन्दैनन्, तिनीहरू के चाहान्छन् जान्दैनन् र के गर्दछन् उनीहरूले सोच्छन् कि अरूले त्यो शून्यता भर्दछन् तिनीहरू आफैंमा महसुस गर्छन् किनकि तिनीहरू आफैंका लागि यो गर्न सक्षम छैनन्।
गम्भीर गल्ती। हामी सबैलाई आफुसँग र अरुसँग राम्रोसँग सम्पर्कको लागि एकल एक्लै एक्लै चाहिन्छ। एकान्तता राम्रोसँग प्रबन्धित गर्न हामीलाई हाम्रो भावनात्मक ब्याट्री रिचार्ज गर्न सक्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » पुनरावृत्त » वाक्यांशहरू » L० एक्लो वाक्यांशहरू जुन तपाईंलाई यससँग लड्न मद्दत गर्दछ
तपाईंको अंग्रेजी सुन्ने सुधारको लागि सुझावहरू